Ukukhiqizwa kweSanitizer Yezandla nge-Industrial Ultrasonic Mixers - iHielscher Ultrasound Technology
Ukukhiqizwa Kwama Sanitizer Yezandla Ngezimboni Zezimbumbulu ezixubile
Ukukhiqiza izinto zokuhlanza izandla kanye nezixazululo zokuqeda amagciwane, kudingeka ubuchwepheshe obunamandla bokuxuba ukuze kutholakale inhlanganisela engaguquki. Abahlanganisi be-Ultrasonic kanye nama-agitators yiteknoloji yokuxuba ethembeke kakhulu futhi ephumelelayo yokuhlanganisa nokufaka izigaba ezimbili noma ngaphezulu ukuze kutholakale ukwakheka okuhle kwesanizer.
I-hand sanitizer, eyaziwa nangaphansi kweminye imigomo ye-antiseptic yesandla, i-handrub, noma i-hand rub, iyi-ejenti esetshenziswayo ezandleni ukuze isuse noma ingasebenzi ama-pathogen ajwayelekile, angadala izifo (isib. Igciwane le-SARS-CoV-2 isifo se-COVID-19). Ama-sanitizer ngesandla atholakala njengamanzi, i-foam, ijeli noma isifutho.
Izicoci zesandla zingahlanganiswa kusetshenziswa izithako ezahlukahlukene nezingoma. Isibonelo, abacoci bezandla bangasuselwa kotshwala noma bangabuphuzi utshwala. Imikhiqizo esetshenziswa ngotshwala esekwe ngotshwala imvamisa iqukethe phakathi kwe-60 ne-95% yotshwala. Njengama-alcohols, ukusetshenziswa kwe-ethanol (i-ethyl alcohol), isopropanol, noma i-n-propanol kuvame kakhulu. Utshwala obugxile kakhulu (okungukuthi ama-60% nangaphezulu) ubhubhisa amaprotheni. Ngama-protein e-denatifying, ama-pathogen amaningi (ama-microorganisms abangela izifo) akasebenzi noma abulawe. Ama-sanitizer angenazandla otshwala angumkhiqizo ohlukile, lapho ama-disinidants, anjenge-benzalkonium chloride (BAC), noma kuma-anti-microbial agents, anjenge-triclosan, asetshenziswa njengesithako esisebenzayo ekwenzeni inactivate noma ukubulala ama-microorganisms. Kuzo zombili, izinto zokuhlanza ezisebenza ngotshwala nezingenawo utshwala, izithako ezisebenzayo ezilwa namagciwane zingomisa isikhumba ngokubhubhisa umgoqo wesikhumba wemvelo. Ngakho-ke, izinhlobo eziningi ze-sanitizer eziqukethe izithasiselo ezinempilo zesikhumba ezinjenge-emollients (isib, i-glycerin, uwoyela) ukuvuselela isikhumba kabusha. Ezinye izithako ezinjengama-thickening agents, amakha, ama-colorant njll zingangezwa ukuguqula ukuthungwa, ukuhogela nokubukeka kwemikhiqizo yezandla yokuthunga.
Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic kanye nokuhlanganiswa kweSanitizer Yezandla
Ama-Ultrasonic agitators awubuchwepheshe bokuxuba obusebenza kakhulu ukukhiqiza ama-sanitisers wesandla (owaziwa nangokuthi i-hand antiseptic, handrub, noma i-hand rub) ngendlela yotshwala, ama-gels, amahlumela noma ama-lotions.
Njengoba abaxube be-ultrasonic bedala amabutho aphezulu e-shear, banikeza ukuyaluza okudingekayo ukuxuba izithako zibe yingxube ehlanganayo. Ukuxuba okunamandla nokunokwethenjelwa okunjalo kuyadingeka ukuze kukhiqizwe ama-ejenti anamandla nanokwethenjelwa amagciwane njengama-sanitizer wesandla kanye nama-ejensi wokuhlanza amagciwane.
Abahlanganisi be-Ultrasonic kanye nama-agitators asebenza kahle kakhulu ekuhlanganiseni izakhi zemikhiqizo yezandla zokuthunga.
Kusebenza kanjani i-Ultrasonic?
Abahlanganisi be-Ultrasonic kanye nama-agitators adala i-acoustic cavitation, okuholela emandleni amakhulu e-shear. Ngakho-ke, izindlela zokuxuba ze-ultrasonic zisetshenziselwa kakhulu ukufaka ezinye uketshezi olwedlula noma olunye futhi ukuhlakazeka kwezinhlayiya eziqinile koketshezi nakuma-slurries. Ukuxuba nokuxubana kwe-Ultrasonic kutholakala ngokuhlanganisa amaza aphezulu we-Ultra enamandla e-liquid noma i-slurry. Amagagasi e-ultrasonic adluliswa nge-provo ephezulu ye-ultrasonic ethangini le-batch noma nge-in-line flow cell reaction. Kuphela ngabangu-probe-hlobo ultrasonicators kuphela abangakwazi ukukhiqiza amandla amakhulu we-cavitational, adingekayo ekwakhiweni kwezixube eziqinile ze-homo native kanye nezinde zesikhathi eside. I-probe ye-ultrasonic iyavevezela ku-ketshezi esikhungweni esiphakeme kakhulu (isib. 20kHz) futhi idale ukuqina kwe-acoustic / ultrasonic cavitation kuketshezi.
Ensimini ekhiqizwe yi-cavitation eyenziwe yakhiqizwa yi-ultrasonically, ukuwohloka kwama-bubble we-cavitation kwakha amabutho anamandla e-shear, okuphazamisa amaconsi, ama-agglomerates ngisho nezinhlayiya eziqinile. Futhi, i-ultrasonic cavitation ikhiqiza imifudlana ewuketshezi yesivinini esikhulu efinyelela ku-1000km / h. Ama-jet we-cavitational liquid jet impinge agglomerates, aphazamise amaconsi, athuthukise ukuhanjiswa kwezinto ngaphakathi koketshezi kanye nokubhukuda nokusabalalisa okukhona kuwo wonke umuthi. Ensimini ye-ultrasonic cavitation, izingcindezi zishintshana ngokushesha nangokuphindaphindiwe phakathi kwe-vacuum kuze kufike ku-1000bar. Isixhumi esijikelezayo esinama-4 mixer blade sizodinga ukusebenza ku-300,000 RPM ukufezekisa imvamisa efanayo yokushintsha imijikelezo yengcindezi. Abahlanganisi abajwayelekile be-rotary nabahlanganisi be-rotor-stator abakhi mali enkulu ye-cavitation ngenxa yokunciphisa kwabo ijubane.
Izandla zeSanitizer zokwenziwa nge-Ultrasonic Blending
Ukwenziwa komkhiqizo wesandla wokuhlanza unquma ukusebenza kwe-sanitizer nokubukeka kokubulala amagciwane (okungukuthi, ama-anti-bacterial, anti-fungal, anti-viral, ukusebenza ngempumelelo ngokumelene namagciwane ambozwe futhi anqunu, izinhlayiya ezifakiwe.)
Kusukela ukusetshenziswa kaningi kotshwala nezihlanzana eziqukethe utshwala esikhunjeni (isib. Izandla) kuphalaza isikhumba, okungaholela ekulimazeni nasekucasukeni, izihlanza ezisesandleni ezinamanzi aqukethe izithako zokunakekela isikhumba, isb. I-aloe vera, i-glycerine, i-jojoba oyela njll.). Umphumela we-ultrasonic emulsation uhlanganisa izigaba ezihlukile zotshwala, izithasiselo, uwoyela namanzi kumkhiqizo ozinzile nanjengo-sanitizer wesandla.
Ukulungiselela i-ultrasonic ye-emulsion (ama-red / amanzi aphuzi). Imizuzwana embalwa ye-sonication ivula izigaba zamanzi / amafutha ahlukene zibe emulsion omuhle.
Izithako ezejwayelekile zeSanitizer Yezandla
i-v65% (noma ephakeme%) yotshwala (ukuze isebenze ngokulwa namagciwane namagciwane ahlukahlukene)
izithako zokunakekelwa kwesikhumba ezinjengamafutha, i-aloe vera, i-glycerine, njll.
Amanzi (isb., amanzi ahlanganisiwe noma oyinyumba)
emulsifier / survivant
inketho, i-thickener (isb. xanthan gum), ama-foam ejenti, amakha, ama-sporicides (isb., i-hydrogen peroxides yokuqeda izikhala zamagciwane)
SonoStation – isethaphu yethangi eliphelele le-ultrasonic eliqukethe ama-probe-hlobo ultrasonicators (lapha 2x I-UIP2000hdT), i-agitator nephampu
Ama-Sanitizer Esandla Asebenzayo Ngokuphikisana ne-COVID-19
Ukuhlanzeka futhi ikakhulukazi ukuhlanzeka kwezandla kuyisici esibalulekile ukuvimbela ukwanda kwesifo sokuphefumula esibuhlungu kakhulu se-coronavirus 2 (SARS-CoV-2), igciwane elibanga lesi sifo COVID-19. Ngenkathi kuhlanjwa ngokuphelele ngamanzi nensipho kunconyelwa lapho kungenzeka, abacoci bezandla kungenye indlela enokwethenjelwa, ikakhulukazi uma ukugeza izandla ngamanzi nensipho kungatholakali.
I-World Health Organisation (WHO) incoma izindlela ezimbili zokuhlanzeka ezisebenza ngotshwala, eziye zahlolwa ukuthi zisebenze ngempumelelo yini ngokumelene ne-coronavirus SARS-CoV-2. Ososayensi abavela eJalimane naseSwitzerland bahlole futhi baqinisekisa ukusebenza kwe-sanitizer 's ngokumelene ne-SARS-CoV-2.
ISanitizer Ukwakhiwa Nombolo 1:
ethanol - 80% ngevolumu (vol / vol)
i-glycerine (eyaziwa nangokuthi yi-glycerol) - 1.45% vol / vol
i-hydrogen peroxide - 0,125% vol / vol
ISanitizer Ukwakheka No. 2:
isopropanol (eyaziwa nangokuthi 2-propanol noma i-isopropyl alcohol) - 75% vol / vol
glycerine - 1.45% vol / vol
Zombili izindlela zokwenziwa kwe-sanitizer ezingenhla zisebenza zingasebenzi kahle i-virus ngemuva kokuvezwa imizuzwana engama-30, uma isetshenziswe ngokuphelele.Ukuhlanganiswa kwezakhi ezingenhla kungenziwa kusetshenziswa i-batch ye-ultrasonic noma i-inline system.
Ukusebenza okuphezulu kwe-Ultrasonicators
I-Hielscher Ultrasonics ngumkhiqizi wesikhathi eside we-high-nguvu ultrasonicators wezicelo ezibandakanya ukuxubana, ukuxubana, kanye nokuphaphama kwezinhlanganisela ezahlukahlukene ze-liquid / ze-liquid noma ezingamanzi / eziqinile.
Ekucutshungweni kokudla / / kwe-pharma-grade kwe-sanitizer yezandla esezingeni lezimboni, imishini yokusebenza ephezulu ye-ultrasonic iyadingeka ukucubungula ivolumu enkulu kusethi ye-batch ye-ultrasonic noma ohlelweni oluqhubekayo lokugeleza. I-Hielscher Ultrasonics umphakeli osebenzisa isikhathi eside futhi omethembayo wemishini yokuhlanganisa ephezulu ye-Ultrason, ehlanganiswe emhlabeni jikelele ekukhiqizeni izitshalo ngaphesheya kwezimboni zokudla, i-pharma, zezimboni zokunakekela nokuzijabulisa.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher Ultrasonics 'asezingeni eliphezulu angalawulwa ngokunembile futhi anikeze opharetha ukulawula okugcwele ngaphezulu kwamapharamitha wenqubo ebalulekile anjenge-amplitude, ingcindezi, izinga lokushisa nesikhathi se-sonication. Lokhu kuvumela ukwenziwa kwenqubo yokwenza i-sonication, okwenza inqubo isebenze kahle kakhulu futhi ibe yezomnotho.
Ububanzi obukhulu bezesekeli ezinjenge-sonotrodes (ama-probes), izimpondo zokuphakamisa, ama-flow cell reaction kanye nokunye okungeziwe kunika amandla ukumisa uhlelo lokuxubha lwe-ultrasonic ngokukhethekile izithako ezisetshenzisiwe kanye nomphumela oqondiwe.
Ukuqapha Inqubo Ye-Ultrasonic
Zonke i-Hielscher digital ultrasonicators – kusuka kwelebhu kuye kusayizi wezimboni – ifakwe isoftware ehlakaniphile, eyenza kube lula ukuyilawula ngokunembile, ukuqapha kanye nokubuyekeza inqubo ye-ultrasonic. Amplitude, umkhawulo wokufaka amandla, imijikelezo yokushayela kanye nesikhathi se-sonication singasetwa kwangaphambili nge-software evumelana nomsebenzisi. Nge-color color touch-bonisa imenyu ingafinyeleleka kalula futhi intuitively ukuphatha. Isilawuli kude esipheqululini senza opharetha ukuthi asebenze futhi aqaphe uhlelo lwe-ultrasonic ukude.
Yonke imininingwane yenqubo ye-ultrasonic ebalulekile (enjenge-amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi, amandla net, amandla aphelele, isikhathi nosuku) zigcinwa ngokuzenzakalelayo ekhadini le-SD elihlanganisiwe. I-protocolling yedatha ezenzakalelayo ibaluleke kakhulu embonini yokudla neyama-pharma, ngoba ivumela umenzi wokudla ukuthi abukeze kabusha isimo sokulungiswa kwanoma iliphi i-lot sonication. Lokhu kunika amandla inqubo yokuma okuhle, okuqhubekayo ngokuphumelelayo kwekhwalithi ephezulu kanye nokuqaliswa Kwemikhuba Emisha Yokukhiqiza (GMP).
Ama-Ultrasonicators weBanga leZimboni
Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic ama-industriel angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes angafika ku-200μm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ku-24/7 ukusebenza. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-sonotrode e-ultrasonic eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima.
Hlanzeka Umkhiqizo Ukwakheka nge-Ultrasonics
Ama-High-Shear Mixers Wokukhiqiza Amazinyo
ICoronavirus (COVID-19, SARS-CoV-2) ne-Ultrasonics